Gudoomiyihii degmada Howlwadaag oo lagu soo khatimay xil ka qaadista gudoomiyaasha – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Gudoomiyihii degmada Howlwadaag oo lagu soo khatimay xil ka qaadista gudoomiyaasha
Muqdisho – Mareeg.com: Gudoomiyihii ugu dambeeyey gudoomiyaashii hore ee degmooyinka gobolka Banaadir ayaa xalay xilka laga wareejiyey, iyadoo sidaas ay kusoo gebagebowday xil ka qaadista gudoomiyaasha degmooyinka.
Gudoomiyahii hore ee degmada Howlwadaag, Maxamed Abuukar (Jacfar) ayaa noqday gudoomihii ugu dambeeyey xilka laga qaado, waxaana xalay degmada Howlwadaag lagu qabtay munaasabad uu xilka kula wareejiyey gudoomiyaha cusub.
Guddoomiyaha cusub ee degmada Howl-Wadaag, Axmednuur Cabdi Siyaad ayaa loo dhiibay xilka gudoomiyaha degmada Howl-wadaag.
Guddoomiyihii hore ee degmada Howl Wadaag, Maxamed Abuurkar Jacfar oo hadal ka jeediyay xil-wareejinta ayaa sheegay in muddadii uu hayay xilka degmada wax badan laga qabtay adeegyada bulshada iyo ammaanka degmada, wuxuu u mahad celiyay shacabka degmada iyo dadkii la shaqeeyay intuu xilka hayay.
Sidoo kale wuxuu dadweynaha ku nool Howl-wadaag ugu baaqay inay la shaqeeyaan guddoomiyaha cusub ee degmada Howl-Wadaag, isagoo ballan qaaday in wixii awooddiisa ah uu ku caawin doono maamulka cusub si uu u sii hormariyo degmada.
Guddoomiyaha cusub ee degmada Howl-Wadaag, Axmednuur Cabdi Siyaad ayaa kadib markii uu u mahadceliyey guddoomiyihii hore, wuxuu sheegay inuu horay usii wadi doono shaqadii wanaagsanayd ee uu soo bilaabay guddoomiyihii hore Jacfar.
Axmednuur Cabdi Siyaad ayaa xusay inuu ahmiyad gaar ah siin doono arrimaha amaanka degmada si dadweynuhu si nabad ah ugu noolaadaan isla markaana ugu ganacsadaan degmada Howl-Wadaag.
Gudoomiyaha xilka laga qaaday ee Howl-wadaag, Maxamed Abuukar Jacfar ayaa ka mid ahaa gudoomiyaashii waxqabadka muujiyey ee degmooyinka gobolka Banaadir, hase ahaatee waxaa booska ka riixay sibadelka ballaaraan ee socday.
Guddoomiyaha gobolka Banaadir Jen. Xasan Maxamed Xuseen Muungaab ayaa beddelay dhammaan guddoomiyeyaashii degmooyinka gobolka Banaadir, iyadoo badeledda gudoomiyaashu soo bilaabatay bishii hore ee Maarso.
Madaxda dowlada oo cambaareeyey qarax dad badan ku dhinteen oo dhacay Baydhabo